Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska ee Afrika ayaa Fariinta Rajada ku faafiyay Kilimanjaro
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska ee Afrika ayaa Fariinta Rajada ku faafiyay Kilimanjaro
Guddiga Dalxiiska Afrika • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika Farriin Rajo
Isagoo sidda dhambaalka rajada horumarinta dalxiiska ee Afrika, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Cuthbert Ncube wuxuu booqday Mount Kilimanjaro, oo ah meesha ugu sarreysa Afrika, isaga oo ay la socdaan safiirrada guddigiisa.
Guddoomiyaha ATB wuxuu ku sugnaa Waqooyiga Tansaaniya ilaa usbuucii la soo dhaafay, isagoo ka qeybgalay Bandhigga Dalxiiska Gobolka ee Koowaad ee Bariga Afrika (EARTE) oo dhammaaday horraantii toddobaadkan.
Guddoomiyaha ATB oo ay weheliyeen koox safiirro muhiim u ah ATB oo ka kala socday dalal kala duwan oo Afrikaan ah, ayaa booqday Marangu, oo ah Xarunta Kilimanjaro National Park.
Waxay sidoo kale booqdeen iridda laga soo galo buurta Kilimanjaro ee fuulitaanka fuulitaanka.
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Booqashada Guddoomiyaha ee Buurta Kilimanjaro waxay muujisay sida ay Guddiga uga go’an tahay inay horumariyaan dalxiiska Afrika, iyagoo faafinaya dhambaalka rajada dib-u-soo-kabashada dalxiiska ee COVID-19 burburka masiibada iyo nuxurka horumarinta dalxiiska gobolka iyo gudaha Afrika.
Buurta Kilimanjaro iyo nawaaxigeeda ayaa ka mid ah meelaha dalxiiska ugu horeeya ee dalxiiska gudaha, gobolka, iyo gudaha Afrika halkaas oo kumanaan ka mid ah kuwa fasaxyada maxalliga ah ay ku qaataan fasaxyada Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub iyo ciidaha Easter.
Tansaaniya waxay shidday “Tooshkii Xorriyadda” ee ugu sarreeyey buurta Kilimanjaro 60 sano ka hor, oo astaan ​​ahaan loola jeeday in ay ka soo dhalaasho xuduudaha ka dibna rajo ka keento meeshii ay quus ka jirtay, jeclaaday meeshii ay cadaawad ka jirtay, iyo ixtiraamkii meesha nacaybku ka jiray. Laakiin sannadkan, fuulayaasha ugu sarreeya Buurta Kilimanjaro, sidaa darteed ATB-da ku xeeran, waxay u dirayaan farriin rajo ah in Tansaaniya iyo Afrika ay yihiin meel ammaan ah oo loogu talagalay martida xilligan oo adduunku la dagaallamayo masiibada COVID-19 iyada oo loo marayo tallaallo iyo tallaabooyin kale oo caafimaad.
Markii ay ka tageen Kilimanjaro, Guddoomiyaha ATB iyo xubnihii la socday waxay booqdeen Beerta Qaranka ee Mkomazi, oo ah beerta kaliya ee wiyisha ee ku nool Bariga Afrika. Waxay ku taallaa Buuraha Pare ee Bariga Arc, beerta waxay hoos timaaddaa maareynta Beeraha Qaranka Tansaaniya (TANAPA) waxayna ku taal meel 120 kiilomitir bari ka xigta magaalada Moshi ee gobolka Kilimanjaro oo u dhexeysa wareegyada safari ee waqooyiga iyo koonfurta Tansaaniya.
Wiyisha ayaa lagu ilaaliyaa gudaha xayndaabka xayndaabka 55-kiiloo mitir oo laba jibbaaran, kaas oo ku dhex yaal xadiiqadda 3,245-kiiloomitir oo laba jibaaran. Dalxiisayaasha ayaa si fudud u arki kara naas -nuujiyayaashan labaad ee ugu waaweyn Afrika si ka fudud kuwa bannaanka duurjoogta ah. Wiyisha madow waxay si xor ah u dhex mushaaxi jirtay inta u dhexeysa Mkomazi iyo deegaanka deegaanka Tsavo oo daboolaya Beerta Qaranka Qaranka Tsavo ee Kenya.
Iyada oo ay weheliso Tsavo, Mkomazi waxay samaysaa mid ka mid ah hab -nololeedka dabiiciga ah ee ugu weyn ee la ilaaliyo ee adduunka. Mkomazi, oo ku teedsan Wabiga Umba, wuxuu martigaliyaa daanyeero midab -kala -sooc leh oo dhif ah kuwaas oo dhex socda kaymaha webiyada. Beerta ayaa leh jawi oomane ah oo leh qaab qaybinta roobabka labada dhinac. Beerta ayaa sidoo kale hodan ku ah noocyada naasleyda. In ka badan 450 nooc oo shimbir ah ayaa lagu duubay beerta nasashada, oo leh tiro ubaxyo iyo fauna u gaar ah. Waxay ka mid tahay dhowr meelood oo la ilaaliyo oo ku yaal Tansaaniya oo ay ku nool yihiin dad aad u badan oo muuqda gerenuk iyo uruurinta Beisa Oryx. Beertaani waa mid ka mid ah savannahyada ugu qanisan Afrika iyo laga yaabee adduunka marka la eego tirada xayawaannada dhifka ah iyo kuwa aan caadiga ahayn iyo flora waxaa caddeeyay joogitaanka eeyaha duurjoogta ah iyo wiyisha madow.
Intii uu booqashada ku joogay Tansaaniya ilaa toddobaadkii hore, Mr. Ncube ayaa soo bandhigay Abaalmarinta Dalxiiska Qaaradda ee ATB 2021 Madaxweynaha Tansaaniya, Samia Suluhu Hassan, iyada oo lagu aqoonsanayo sida ay uga go’an tahay horumarinta dalxiiska Tansaaniya. Soo bandhigista abaalmarinta ATB ee madaxweynaha Tansaaniya ayaa dhacday intii lagu guda jiray furitaanka rasmiga ah ee Bandhigga Dalxiiska Gobolka Bariga Afrika ee Kowaad (EARTE) oo lagu qabtay magaalada Arusha ee Waqooyiga Tanzania. Madaxweynuhu wuxuu hagayey ururinta dukumintiga Dalxiiska Boqortooyada oo ay ka muuqdaan meelaha dalxiiska ee Tansaaniya, oo ay ka mid yihiin dadaallo kale oo ay shaqsi ahaan u qaadday si kor loogu qaado horumarinta dalxiiska ee Tansaaniya iyo Afrika.